आज मंसिर १ गते बुधवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल – Krazy NepaL
आज मंसिर १ गते बुधवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल
November 17, 2021 196
२०७८ मंसिर १ गते, बुधवार, १७ नाेभेम्बर २०२१। कार्तिक शुक्लपक्ष त्रयाेदशी तिथि १०ः१५ बजेदेखि चतुर्दशी। अश्विनी नक्षत्र। चन्द्रराशि– मेष।
खर्च बढ्ने समय रहेको हुँदा धेरै रकम जोहो गर्नुपर्ला। सोखले विलासी वस्तुहरूमा खर्च गराउनेछ। उठ्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउँदा लाभांशमा घाटा लाग्न सक्छ। आफन्तबाट टाढिनुपरे पनि टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ। लामो यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। नयाँ कुरा हातपार्न केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। पछिका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
कर्मक्षेत्र सबल रहनेछ भने विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन्। दिगो काम प्रारम्भ हुनेछ। आँटेका काममा वरिष्ठ व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनेछ। कर्मयोगले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा विशेष जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छ। व्यापारमा लाग्नेहरूलाई पनि सामान्य फाइदै हुनेछ। सोख तथा भोग–विलासमा मन जाने हुँदा फजुल खर्च भने बढ्न सक्छ।
प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। आम्दानी रोकिनाले योजना स्थगन हुन सक्छ। लेनदेनको विवादले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। काम बिग्रने भयले सताउनेछ परिस्थितिले चुनौतीहरूसँग सम्झौता गराउन सक्छ। ठूलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तुसमेत गुम्न सक्छ। सानो कमजोरीले सुनिश्चित प्रतिफलसमेत हातपार्न कठिनाइ देखिन्छ।
व्यावसायिक काममा केही चुनौती देखिए पनि घरमा लक्ष्मी भित्र्याउने समय छ। मेहनत गर्दा दिगो फाइदा हुनेछ। साझेदार तथा आफन्तजन सहयोगीका रूपमा देखा पर्नेछन्। पहिले रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ हुनेछ। काममा अरूको भरपर्नु भन्दा परिवारजनको सहयोग लिँदा राम्रो हुनेछ। तर महत्त्वाकांक्षी योजना अहिले नै सार्वजनिक नगर्नुहोला।
Prevतपाईलाई ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने यी ६ घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
Nextमंसिर महिनामा चम्किने छ यी ६ राशिको भाग्य ! हेर्नुहोस् मासिक रा’शि’फ’ल
सासुका बहुतै प्यारी हुन्छन् यी ६ राशिका बुहारी, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
प्रशान्त तामाङको मृत्युको हल्ला के हो ? पत्नीले लेखिन् यस्तो स्टाटस !
यी राशि भएका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर श्रीमती, हुन्छन् असाध्यै गुणवान !